"4 3 2 1", entsha evela kumbhali uPaul Auster kaSeix Barral | Uncwadi lwangoku
«4 3 2 1», entsha evela kuPaul Auster
Besisele sijonge phambili into entsha evela UPaul auster, kwaye nangona kuthathe ixesha ukuphuma (kwabo bethu abalandela umbhali kancinci kwaye bonwabele phantse zonke izinto azifundileyo), sele sinayo nathi. Ngesihloko esinqabileyo ubuncinci: "4 3 2 1", ipapashwe phantsi kwe Umhleli weSeix Barral. Emva koko, sikuxelela okungakumbi malunga nale ncwadi kwaye sikushiya nodliwanondlebe olufutshane umbhali ngokwakhe awunike umpapashi.
Inye kuphela engatshintshiyo kubomi bukaFerguson kukuba wazalwa ngo-Matshi 3, 1947, eNewark, eNew Jersey. Ukusukela ngalo mzuzu ukuya phambili, kuvuleke iindlela ezahlukeneyo phambi kwakhe kwaye ziya kumkhokelela ekubeni aphile ubomi obahluke ngokupheleleyo, ukukhula nokukhula uthando, ubuhlobo, usapho, ubugcisa, ezopolitiko kunye nokufa ngeendlela ezahlukeneyo, kunye nezinye zezehlo Kwaphawulwa isiqingatha sesibini senkulungwane yamashumi amabini aseMelika njengasemva.
Ungathini xa ubunokuziphatha ngokwahlukileyo ngelona xesha libalulekileyo ebomini bakho? 4 3 2 1Inoveli yokuqala kaPaul Auster kwiminyaka esixhenxe, ngumfanekiso oshukumayo wesizukulwana sonke, a ukuza kobudala Indalo iphela kunye nesaga yosapho evavanya ngendlela eqaqambileyo umda wamathuba kunye neziphumo zezigqibo zethu. Kungenxa yokuba wonke umsitho, nangona unokubonakala ungenamsebenzi, uvula amanye amathuba kwaye uvale eminye.
Udliwanondlebe noSeix Barral
Udliwanondlebe: Yenzeka njani le nto?
UPaul Auster: Andazi. Ngenye imini ndandilapha endlwini yam kunye nombono wokubhala ibali lobomi lomntu ngokwahluka, ubomi babo obufanayo, bandibetha. Kwavela. Andazi ukuba kutheni okanye njani. Andizange ndikwazi ukulandela imvelaphi yombono wencwadi. Umzuzwana akukho nto kwaye umzuzu olandelayo unento apho. Andizange ndikwazi ukuwufumana loo mzuzu xa kungekho nto iba yinto. Kwenzekile. Into endinokukuxelela yona kukuba bendinemincili kakhulu ngalo mbono, eyinto endibambe kakhulu. Ndimele nditsho, ndiyibhalele ubushushu, ibingathi kukudanisa kwaye kujikeleza, kwaye bekukho uhlobo olungxamisekileyo lwento ebendiyenza eyayingaqhelekanga.
Udliwanondlebe: Uyakhumbula mhla ubomi bakho batshintsha?
UPaul Auster: Incwadi ayisiyoncwadi yomntu, akunjalo. Kodwa kukho inyani ngaphakathi kuye ehambelana nento eyenzeke kum, ngokobuqu, xa ndandineminyaka eli-14 ubudala. Kwathi xa ndandisekampini yasehlotyeni kwaye iqela labafana, malunga namashumi amabini kuthi, saya ehlathini ukuze sihambe kwaye sabanjwa kwindudumo enkulu. Kwaye sifuna ukubaleka kwimitha, sangena ebaleni, ukucoca. Ukuze sikwazi ukuyifumana, kwakufuneka sirhubuluze ngaphantsi kocingo oludibanisa amakhonkco. Emva koko saya kwifayile enye, nganye nganye, phantsi kocingo. Kwakukho inkwenkwe phambi kwam, ndithetha ukuba ndisondele kangangokuba iinyawo zakhe zazizii-intshi ebusweni bam. Kwaye xa wayedlula phantsi kocingo, umbane wabetha, wambulala kwangoko. Kwaye ndicinga ukuba yeyona nto igqwesileyo endakha ndayibona. Bona inkwenkwe isweleka kwangoko. Yinto endihlasele ubomi bam bonke. Kwaye le ncwadi, ndiyacinga, iphuma kula mava. Ke yinto endihambe nayo ukusukela kwiminyaka eyi-14.
UPaul Auster: Kukho amanye amaxesha abalulekileyo ebomini bam. Ndicinga ukuba ingozi yokufumana umfazi wam, uSiri Hustvedt, yeyona nto ibaluleke kakhulu. Kwaye kwenzeka ngamabona-ndenzile. Ngamanye amaxesha ndicinga ukuba ngekwenzeke ntoni kum ukuba besingadibananga ngoluhlobo. Buhluke njani ubomi bam bonke? Ngale nto andithethi ukuba ithuba lilawula yonke into. Sinenkululeko yokuzikhethela, sinenkululeko yokuzikhethela nokwenza izigqibo. Sikwanazo neembopheleleko kunye neemfuno zokwanelisa. Kodwa into esihlala siyenza, ukunyaniseka ngento obuyiyo ubomi, kukuqonda nokwamkela ukuba izinto ezingalindelekanga zihlala ziyinxalenye yobomi.
Udliwanondlebe: Inoveli ngobomi.
UPaul Auster: Ke ndiye ndaqala ukucinga ukuba kutheni ndicamngca ngalo mbuzo, yintoni ubume bencwadi kunye nento engekhoyo. Ngokucacileyo, yonke into evela kwingcinga yakho iphefumlelwe ngamava akho. Kodwa, umzekelo, ukuba unomlinganiswa kwinoveli yakho otshaya icuba kwaye utshaye imidiza engama-10.000 XNUMX ebomini bakho, ngaba loo nto iyimbali okanye akunjalo? Kwaye nakweyiphi na imeko, i-crux yomcimbi yintsomi. Naxa ubeka oko kubizwa ngokuba "zizinto zokwenyani" kwinoveli, baba ziintsomi, baba yinxalenye yentsomi. Ndicinga ukuba iya kuba kukuchazwa gwenxa kokubona incwadi njengohlobo lwesithunzi somntu. Ayiyo. Akunjalo konke konke.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » «4 3 2 1», entsha evela kuPaul Auster